FAQs | KBZSC
Cash Withdrawal FAQs
1) How can I request to withdrawal the remaining cash balance? Do I need to come in to request cash withdrawal?
You can request cash withdrawal by coming into our office or by calling us at 01 230 7300~02.
2) What are the required documents to withdrawal cash?
We need to verify customers with 1) Trade account 2) Original NRC 3) Bank account info
3) What is the cash withdrawal process for out-of-Yangon account holders?
You can request cash withdrawal by phone if you are outside of Yangon.
4) Can I withdrawal the cash right away after making the sell transactions?
You can request the cash withdrawal after the trade settlement day which is T+3.
5) How long it takes for cash withdrawal process?
The money is available the next day after the request of cash withdrawal.
1) What are the required documents foranew trading account?
A person needs to come in with an original NRC and an original bank book; either saving or call deposit.
2) How long it takes to openanew trading account?
Usually it would take up to half hour to haveanew trading account opened.
3) What kind of document I receive after trading?
You will receiveaContract Note which includes the transaction details of your trade.
4) Is trading/securities account interest bearing? OR Do securities/trading accounts receive bank interest on the fund balance?
Securities account is different from bank account. It does not earn interest.
5) Can someone trade on behalf of the trading account owner?
Normally only trading account owner can trade for him/herself. But for certain situation, the trading account owner can transfer the rights for trading by presenting General or Special power to the designated person. Original documentation of power of attorney is required for any events.
6) How can we deposit money to KBZSC?
You can deposit money at any KBZ banks by quick pay system or ibanking system.
7) How can we know if our trading transaction is executed or not?
We canmessage to your registered mobile phone aftermatching time.
8) Do the traded money automatically come into bank account the next day after T+3?
No, you have to request cash withdrawal by calling or dropping by at KBZSC. You can also request cash withdrawal at the time of placing sell order on call or by person.
9) Do we need to pay charges for opening trading account?
You don’t need to pay any charges for opening.
1) What documents are required for trading securities?
You are required to present your KBZSC Trading ID and NRC Card/Number.
2) What is the trading procedure at KBZSC?
In order to trade, you can submit orders by either calling KBZSC Trading Department, dropping by at KBZSC office in person with your NRC Card or placing order via our KBZSC mobile app and internet trading. To buy securities, you are required to deposit money into your securities account in advance.
3) Which numbers should I call to place an order by phone?
You can call KBZSC Trading Department at 01 230 7305~08 to place an order by phone.
4) What are the hours to place orders by phone?
You can place phone orders from 9:30 am to 12:55 pm for current day orders. For pre-orders for the next business day, you can dial in between 2:00 pm to 4:30 pm.
5) What happens if I place an erroneous order via Mobile App or the Internet Trading System?
If your order has not been executed, you can cancel your order. If your order has been executed, you cannot cancel it and will have to honor the transaction.
6) How can I look for my share and fund balances in my trading account?
You can find your share and fund balances in KBZSC Internet Trading Website and Mobile Application under Fund Balance and Portfolio. You can also call our office to inquire for your balances.
7) What is Trade Balance?
Trade Balance is the amount of money that you can be used to place additional orders.
8) What is Block Balance?
Block Balance means the amount of fund that is blocked in equivalent of the buy order(s) that you have placed.
9) What are Available Funds?
Available Funds mean the amount of money that could be transferred to your bank account from your securities account.
10) What are the fees and commissions regarding to trading stocks?
For buy orders, you will have to pay KBZSC commission and the government Stamp Duty of 0.1% of trading value. For sell orders, you are required to pay only KBZSC commission.
11) What are the YSX Holidays?
YSX Holidays are weekends and gazetted holidays as set by the Government of the Republic of Union of Myanmar.
12) Where can I search of the information relevant to the listed companies?
You can search for the news and updates of the listed companies on Yangon Stock Exchange website and the respective website of the listed companies.
13) What are the trading hours of Yangon Stock Exchange?
The trading hours of Yangon Stock Exchange are between 9:30 am and 1:00 pm. There are7matching times in total daily at 10:00 am, 10:30 am, 11:00 am, 11:30 am, 12:00 pm, 12:30 pm and 1:00 pm respectively.
14) How can I change the password of my KBZSC securities account?
You can change your password at https://trade.kbzsc.com/ST_Web_INTERNET/.
15) What are the requirements to change the password of my securities account?
The requirements to change the password of the securities account are minimum5characters and maximum 12 characters.
16) What do I do if I forget password of my KBZSC securities account?
If you forget your password, you need to call KBZSC customer service at 012307300~02. Our customer service will help you with resetting password over the phone.
17) What are the daily price limits for stocks listed on YSX?
Depending on the base price ofastock foraparticular day, YSX set an upper limit price andalower limit price. The below table shows the detail daily price limits with respect to various base prices.
18) What are the daily tick sizes for each stock?
The tick size represents the minimum amount thatastock price could move up or down atatime with respect to the base price. The below table shows the tick sizes for each base price range.
19) What is the difference betweenamarket order and limit order?
A limit order is an order placed, to buy or sellastock ataspecified price or better.
A market order is an order placed, to buy or sellafinancial instrument immediately at the best available current price. (Note:- Placingamarket order may result inacustomer buying/selling ataprice which he/she may not have expected.)
20) Can I sellashare that I do not own (short sell)?
No, you cannot sellashare that you do not own. Short selling is prohibited.
21) How is the expected traded price ofastock calculated?
The expected traded price ofashare is calculated by determining the price at which the highest volume ofastock could be traded at each matching time.
၁) ငွေသားထုတ်ယူရန် KBZSC ရုံးသို့လာရောက်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
ငွေသားထုတ်ယူရန်အတွက် KBZSC ရုံးသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖုန်းနံပါတ် ၀၁၂၃၀၇၃၀၀-၀၂ သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၂) ငွေသားထုတ်ယူရန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖော်ပြပါ။
ငွေသားထုတ်ယူရန်အတွက် လူကိုယ်တိုင်နှင့်တကွ Trading Account Number ၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း ၊ ဘဏ်စာအုပ်တို့ ယူဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
နယ်မှငွေထုတ်ယူခြင်းအတွက် KBZSC သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အရောင်းပြုလုပ်ထားသောငွေအားအရောင်းပြုလုပ်ပြီးနောက် ၃ရက်မြောက်နေ့တွင် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၅) အကောင့်တွင် ရှိသောငွေပမာဏကိုထုတ်ယူရန် အချိန် ဘယ်လောက်ကြာသနည်း။
အကောင့်တွင် ရှိသောငွေပမာဏကိုထုတ်ယူရန် အချိတစ်ရက်ကြာပါမည်။
၁) ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုစာရင်းဖွင့်ရန်မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။
ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုစာရင်းဖွင့်ရန် လူကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်မူရင်း နှင့်တကွဘဏ်စာအုပ် ( ငွေစုစာအုပ် သို့မဟုတ် ခေါ်ယူအပ်ငွေစာအုပ် ) တို့လိုအပ်ပါသည်။
၂) အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန် အချိန် ဘယ်လောက်ကြာမည်နည်း။
အကောင့်ဖွင့်ပြီးအကောင့်နံပါတ်ရယူရန် ပုံမှန်အားဖြင့် နာရီဝက်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃) ရှယ်ယာများ ဝယ်ရောင်းပြီး လျှင် ဘယ်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းရရှိမည်နည်း။
ရှယ်ယာများဝယ်ရောင်းပြီးလျှင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်နေ့ရက်၊ အရောင်းအဝယ်အမျိုးအစား၊ဈေးနှုန်းစသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည့် အတည်ပြုမှတ်တမ်းစာရွက် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄) ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်အကောင့် ( Securities Account ) တွင်ရှိသောငွေပမာဏအတွက် အတိုးရရှိပါသလား။
ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်အကောင့်သည် ဘဏ်အကောင့်နှင့်မတူသည့်အတွက် အတိုးရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၅) မိမိ၏ အကောင့် ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသူတစ်ယောက်က ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်လို့ရပါသလား။
ပုံမှန်အားဖြင့် အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။သို့သော် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် အရောင်းအဝယ်မပြုလုပ်နိုင်ပါက အခြားသူတစ်ဦးဦးအားကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်စေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်သည ်အခွင့်အာဏာလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ် ( Special power or General power ) မူရင်းယူဆောင်လာရပါမည်။ ထိုစာချုပ်များသည် ရှေ့နေ့နှင့် တရားဝင်ပြုလုပ်ထားသည့် စာချုပ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၆) KBZSC အကောင့်ထဲကိုဘယ်လိုငွေသွင်းနိုင်မည်နည်း။
KBZ မည်သည့် bank တွင်မဆို၊ Quick Pay နင့် သော်််လည်းကောင်း iBanking System နှင့်သော်လည်းကောင််း KBZSC အကောင့်ထဲသို့ ငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
၇) အရောင်းအဝယ်ဖြစ်၊ မဖြစ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Matching ချိန် ပြီးတာနှင့် သင်၏ စာရင်းသွင်းထားသော mobile ဖုန်းထဲသို့ စာတိုပို့ပေးပါမည်။
၈) T+3 ပြီးတာနဲ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ထားတဲ့ငွေတန်းဝင်တာလား။
မဟုတ်ပါဘူး၊ KBZSC သို့ ဖုန်းနှင့်ဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုငွေထည့်ပေးခိုင်းရမှာပါ။ အရောင်းအော်ဒါတင်သွင်းသည့်အခါတွင်လည်း ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ငွေထည့်ပေးခိုင်း၍ရပါသည်။
၉) အကောင့်ဖွင့်ရန်အတွက် charges ပေးရလား။
အကောင့်ဖွင့်ရင် မည်သည့် charges မှမပေးရပါဘူးရှင်။
၁) ရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ချက်များ ကိုဖော်ပြပါ။
အရောင်း/အဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် KBZSC Trading ID နှင့် မှတ်ပုံတင်လိုအပ်ပါသည်။
၂) ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်လိုလျင် မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
စာရင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းဆက်၍သော်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်ကောင်တာသို့ လာ၍သော်၎င်း၊ KBZSC Mobile App (သို့) Internet trading မှတဆင့် ရောင်း/ဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူမည်ဆိုပါက Trading Account ထဲသို့ ငွေကြိုတင်သွင်းထားရပါမည်။
၃) ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး ရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်လိုလျင် မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
KBZSC တွင်အော်ဒါတင်ရန်ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်ဖုန်းများမှာ ၀၁ ၂၃၀ ၇၃၀၅ မှ ၀၁ ၂၃၀ ၇၃၀၈ အထိဖြစ်ပါသည်။
၄) ဖုန်းဖြင့်ရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်သည့် အချိန်များကို ဖော်ပြပါ။
နေ့ချင်းအော်ဒါများကို ဖုန်းဖြင့်တင်နိုင်သည့်အချိန်များမှာ မနက် ၉း၃၀ မှ နေ့လည် ၁၂း၅၅ အထိဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့အတွက်အကြိုအော်ဒါများကို နေ့လည် ၂း၀၀ မှ ၄း၃၀ အထိဖုန်းဆက်၍တင်နိုင်ပါသည်။
၅) အမှာလွှာကို အင်တာနက် (သို့) ဖုန်း အက်ပလီကေးရှင်းမှ တဆင့် မှားယွင်းစွာ တင်သွင်းမိပါက မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသနည်း။
အရောင်းအဝယ် မဖြစ်မြောက်ပါက အမှာလွှာကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်မြောက်ပြီးပါက ပယ်ဖျက်၍ မရနိုင်တော့ဘဲ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်မြောက်ခြင်းကို လက်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆) မိမိပိုင်ဆိုင်သော ရှယ်ယာအရေအတွက် နှင့် ငွေကြေး ပမာဏ ကို ဘယ်မှာရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။
KBZSC Internet Trading Website (သို့) Mobile Application ရှိ Fund Balance နှင့် Portfolio တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့်လည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၇) Trade Balance ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Trade Balance ဆိုသည်မှာ အကောင့်ထဲတွင်ထက်၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သောငွေပမာဏဖြစ်ပါသည်။
၈) Block Balance ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Block Balance ဆိုသည်မှာ အဝယ်အော်ဒါတင်ထား၍ ယာယီဖယ်ထားသောငွေပမာဏဖြစ်ပါသည်။
၉) Available Funds ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Available Funds ဆိုသည်မှာ securities account မှ ဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေသားအဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သောပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။
၁၀) စတော့ရှယ်ယာ ဝယ်ရောင်းရာတွင် ကျခံရမည့် ကော်မရှင်နှုန်းထားများ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသနည်း။
ရှယ်ယာဝယ်လိုပါက KBZSC ၏ commission နှင့် နိုင်ငံတော် တံဆိပ်ခေါင်းအခွန် (ဝ.၁%) ဆောင်ရပါမည်။ ရှယ်ယာရောင်းလိုပါက KBZSC ၏ commission ဆောင်ရပါမည်။
၁၁) ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ ပိတ်ရက်များကိုဖော်ပြပါ။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ ပိတ်ရက်များမှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် အခြားအစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ဖြစ်ပါသည်။
၁၂) သက်ဆိုင်ရာရှယ်ယာကုမ္ပဏီများ၏ သတင်းအချက်အလက်များ ကို ဘယ်မှာ ကြည့်ရှုနိင်မည်နည်း။
သက်ဆိုင်ရာရှယ်ယာကုမ္ပဏီများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ website နှင့် သက်ဆိုင်ရာရှယ်ယာကုမ္ပဏီများ၏ website ပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၁၃) ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ရှယ်ယာများ ရောင်းဝယ်နိုင်သည့်အချိန်များ ကို ဖော်ပြပါ။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသည် မနက် ၉း၃၀ တွင် ဈေးကွက်စဖွင့်၍ နေ့စဉ် မနက် ၁၀ နာရီ၊ ၁၀ နာရီခွဲ၊ ၁၁ နာရီ၊ ၁၁ နာရီခွဲ၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီ၊ ၁၂ နာရီ ခွဲ နှင့် ၁ နာရီတို့တွင် အရောင်းအဝယ်ပုံမှန်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
၁၄) လျှို့ဝှက်နံပါတ် ပြောင်းလဲ ခြင်း မည်သို့ပြုလုပ်ရမည် နည်း။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်ပြောင်းလဲရန် https://trade.kbzsc.com/ST_Web_INTERNET/ သို့ဝင်ရောက်၍ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၁၅) လျှို့ဝှက်နံပါတ် ပြောင်းလဲရာတွင် ပါဝင်ရမည့် လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြပါ။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်ပြောင်းရန် လျှို့ဝှက်နံပါတ်အရေအတွက်ကို အနည်းဆုံး ၅လုံးမှ ၁၂လုံးအထိပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁၆) KBZSC securities account ၏ လျှို့ဝှက် နံပါတ် မေ့သွားခဲ့လျှင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း ?
လျှို့ဝှက်နံပါတ်မေ့သွားခဲ့လျှင် KBZSC ၏ customer service ဖုန်းနံပါတ် 012307300~02 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ KBZSC ၏ customer service မှ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသစ်ကို ဖုန်းမှတဆင့် ကူညီပြောင်းလဲပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၇) ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းရှိရှယ်ယာများ၏ နေ့စဉ်ဈေးနှုန်းကန့်သတ်ချက်များကိုဖော်ပြပါ။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းရှိ ရှယ်ယာတစ်ခုချင်း၏ နေ့စဉ်ကြမ်းခင်းဈေးကိုမူတည်၍ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေဈေးနှင့် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဈေးများကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် ကြမ်းခင်းဈေးများ၊ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေဈေးများ နှင့် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေဈေးများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၈) ရှယ်ယာများ၏ တစ်ချက်ခုန်ဈေးများကိုဖော်ပြပါ။
ရှယ်ယာတစ်ခုချင်း၏ နေ့စဉ်ကြမ်းခင်းဈေးကိုမူတည်၍ တစ်ချက်ခုန်ဈေးများကိုသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် ကြမ်းခင်းဈေးများ နှင့် သတ်မှတ်တစ်ချက်ခုန်ဈေးများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၉) Limit Order နှင့် Market Order ၏ကွာခြားချက်ကိုဖော်ပြပါ။
Limit Order ဆိုသည်မှာ ရှယ်ယာတစ်စုအား မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဈေးအားသတ်မှတ်ပြီး အရောင်း/အဝယ်အော်ဒါတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Marke Order ဆိုသည်မှာ ရှယ်ယာတစ်စုအား မည်သည့်ပေါက်ဈေးနှင့်မဆို အရောင်း/အဝယ်အော်ဒါတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ချက် :- Market Order ဖြင့် အရောင်း/အဝယ်ပြုလုပ်ပါက မိမိမမျှော်မှန်းထားသည့်ဈေးများဖြင့်လည်း အရောင်း/အဝယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၂၀) မိမိမပိုင်သေးသော ရှယ်ယာများကို ကြိုပွိုင့်ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်၍ရပါသလား။
ပြုလုပ်၍မရပါ။ ရှယ်ယာများကို ကြိုပွိုင့်ရောင်းချခြင်းအား ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါ။
၂၁) ရှယ်ယာတစ်ခု၏ ဖြစ်နိုင်ခြေဈေးကို မည်သို့သတ်မှတ်သနည်း။
ရှယ်ယာတစ်ခု၏ သတ်မှတ်ထားသည့် တစ်နေ့တာဈေးနှုန်းများအနက် ရှယ်ယာအစုရေ အများဆုံးအရောင်း/အဝယ်ဖြစ်နိုင်သည့်ဈေးနှုန်းအား matching time များတွင် ဖြစ်နိုင်သောပေါက်ဈေးဟု သတ်မှတ်ပါသည်။